पिउने पराल, एल्यूमीनियम पन्नी कागज, आंसू टेप, स्थानान्तरण Paperboard - Fancyco
पीएलए बोट बाट सामाग्री पैकिंग एक प्रकारको छ। यसको खाना सुरक्षा परम्परागत प्लास्टिक सम्पर्क भन्दा उच्च छ। प्रभाव प्रयोग गरेर पारंपरिक प्लास्टिक हासिल गर्दा उत्पादनहरु प्रदर्शन, 100% जैवअपघट्य र छोडेर। यसलाई बाहिर निकालन सजावट Blown फिलिम लागि प्रयोग गरिन्छ कि, polylactic एसिड राल सिद्ध हुन सक्छ। यो पनि प्रयोगकर्ता मात्र होइन मशीनिंग प्रक्रियामा कम उत्सर्जन लागि, उत्पादन को एक राम्रो अनुभव दिन, बस एक सामाग्री परिवर्तन छैन। एकै समयमा त्यागेर पछि पनि वातावरण जोगाउन ध्यान।
हामी कच्चा एल्यूमीनियम पन्नी कागज, एसीटेट तान्नु, BOPP फिलिम, फिल्टर रड लागि प्लग लपेटन कागज, चुरोट लपेटन कागज, चुरोट पैकिंग लागि आन्तरिक फ्रेम बोर्ड, आंसू टेप, र टिप सहित चुरोट लागि सामाग्री को निर्यात मा अनुभव को एक पूर्ण दायरा कागज।
प्लास्टिक समस्या: प्रति व्यक्ति 1.6 straws प्रति dayAmericans 2.5 पटक कहिल्यै दिन पृथ्वी वरिपरि र्याप पर्याप्त प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा उनि हल्का हुनुहुन्छ हो प्लास्टिक straws.Ecosystem PollutionBecause, straws तिनीहरू साफ गर्न सकिँदैन समुद्र बाहिर टाउको र wildlife.Not recyclable गैर-biodegradablePlastic straws हानी पानी तरिका, मा झटका। तिनीहरूले विघटित छैन र तिनीहरूले हाम्रो भूमि प्रदूषित बनाउँछ र हाम्रो oceans.It Eco समय छ! हामी sugarcane bagasse Tablewares, यस्तो कप, clamshell, कचौरा, ट्रे, प्लेट र यति र रूपमा wheet पराल खाना कन्टेनर सहित जैवअपघट्य diposables मा विशेष रेस्टुरेन्ट, पिकनिकको र दलहरू प्रयोग अन्य डिस्पोजेबल आइटम।
Fancyco 2004. पाइएको थियो हाम्रो कम्पनी 14 वर्ष भन्दा बढी Alibaba मा सुनको आपूर्तिकर्ता भयो। यसलाई हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ जो 2005 मा एक महत्वपूर्ण मोड थियो। 2015 मा Fancyco सफलतापूर्वक नाइजेरिया र युगान्डा बजार प्रवेश र यी देशहरूमा यो स्टिकर कागज र स्वच्छता उत्पादनहरु को नम्बर 1 ब्रान्ड स्थापित गर्नुहोस्। अब हामी पैकिंग र मुद्रण सामाग्री मा विशेष गर्दै छन्।